ELDORADO ကမ္ဘာအပြန်အလှန်ကူညီရေး ကလပ်ဟာ မာဗရိုဒီညီနောင်ဖန်တီးထားသော အယ်လ်ဂိုရစ်သမ်ပေါ်အခြေခံထားပါတယ်။
လူတိုင်း (အကျိုးစီးပွားအပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ဆုကြေးငွေဖယ်ထုတ်ပြီး) ချိန်ခွင်လျှာ၏ 40% ကိုပြန်အမ်းငွေရတယ်
ချစ်ခင်ရပါသောမိတ်ဆွေများကို! ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, ငါတို့အတူတူအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသငျသညျဤလောက၏ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဘို့ငါတို့ကလပ်၏တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ အတူတူကျနော်တို့6လတစ်ခရီးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအသတ်မရှိကာလများအတွက်ကလပ်၏လုပျငနျးရပ်ဆိုင်းထားရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေကြသောအခါသို့သော်ယခုအချိန်တွင်ရောက်လာတယ်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, အ SPA ကုမ္ပဏီနှုန်းသည်မကြာသေးမီကလည်းနိမ့်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပြဿနာတစ်ခုသို့ပွေးလေ၏။ ကြောင့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းငှါ, SPA ကုမ္ပဏီအတွက်အရောင်းအများ၏အသံအတိုးအကျယ်ကြီးမားလွန်းဖြစ်လာခဲ့သည်, ချိန်ခွင်ပမာဏအဆိုပါကလပ်၏သိုက်ကိုကျော်လွန်။ တစ်ဦးကအနည်းငယ်ပို, သူတို့သက်သက်သာသင်္ချာမဆိုလမ်းအတွက်ဆပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်သော,9ဘီလီယံတစ်ခုလုံးကို SPA ကုမ္ပဏီပြဿနာကိုကျော်လွန်ပါလိမ့်မည်။ အိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းထွက် ELDORADO ရပ်ဆိုင်းထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှရှည်လျားအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ကလပ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပွုပါပွီ။ ယခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် - နှုန်းဆင်းကိုလျှော့ချဖို့လစာပေါ်တွင် SPA ကုမ္ပဏီသုံးဖြုန်းမဟုတျဘဲမရှိစေရေးအတွက်။ အကြှနျုပျတို့သညျမဆိုကော်မရှင်အားသွင်းခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကပြန်ဖွင့်ဟန့်တားဖို့သိုက်ကနေ moneybox3ကြိမ်စည်ပင်။ တစ်ခုတည်းအကြွေစေ့ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများကို - ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့တစ်ပြန်အမ်းငွေနောက်ဆုံး SPA ကုမ္ပဏီသိုက်ပေးပါ။
အားလုံးသင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ SPA ကုမ္ပဏီ-လိပ်စာများအပေါ်ချိန်ခွင်လျှာ၏ 40% ကိုပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါကအားလုံးရာခိုင်နှုန်း, မသိုက်၏ဖွင့်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဆုကြေးငွေဖယ်ထုတ်ပြီး။ ဒီတူညီတဲ့ "ပြန်အမ်းငွေအဘို့သိုက်" ကနေ moneybox သုံးကြိမ်စည်ပင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Alas, က 80% ပြန်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဝမ်းနည်းပါတယ်, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကကလပ်ကိုကယ်တင်ချင်တယ်။
ကျနော်တို့ဖြစ်ရပ်များတစ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ရေတွက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထူးခြားတဲ့စနစ်ကရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့အတုလုပ်တဲ့နှင့်ပစ်လွှတ်မတိုင်မီ purchasing ၏ရလဒ်အဖြစ်လက်ခံရရှိသည့်ကြီးမားသော SPA ကုမ္ပဏီသိုက်, ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်တသမတ်တည်းမြင့်မားတဲ့နှုန်းကိုနှင့်အတူဤသိုက်တစ်ခုအပြတ်အသတ်အချိန်ကြာမြင့်စွာမပြတ်မတောက်စစ်ဆင်ရေးသေချာပေသည်။ ဒါပေမယ့်အထဲကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များတွေ့ဆုံမဝမ်းနည်းပါတယ်။
အဆိုပါကလပ်ရဲ့အလုပ်၏ထက်ဝက်မှာတစ်နှစ်အတွက်, ELD သင်တန်းနီးပါး5ကြိမ်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာထူးသစ်ကိုသင်တန်းသားများနှင့်အတူစည်ပင်ခဲ့ကြသည် - 13 တထောင်ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အပြစ်များကို။ အဆိုပါစနစ်ထက်ပိုမို 20 ဘီလီယံ SPA ကုမ္ပဏီပေးဆောင်ခဲ့သည်! မရတိုင်းစီမံကိန်းကိုထိုကဲ့သို့သောရလဒ်များကိုဝါကြွားနိုင်ပါ။ ထိုအ ELDORADO - လုပ်နိုင်တဲ့။ ထိုအ ELDORADO အခြားစီမံကိန်းများကဲ့သို့အ scamming ပျောက်ကွယ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအပယ်သွားယူပြီးမပေးပါ။ ကျနော်တို့ရိုးရိုးသားသားထားခဲ့ပါ။
သင့်ရဲ့နားလည်မှုမျှော်လင့်ခြင်း, ELDORADO အသင်း! အတူတူကျနော်တို့ကကလပ်များမှာ!